HomeTURKEYGobolka Central Anatolia26 EskisehirTULOMSAS 1 Shaqaale-weyne Xukumeyn Hore Ayaa Lahaa
25 / 11 / 2019 26 Eskisehir, Gobolka Central Anatolia, Shaqooyinka, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
tulomsas shaqaalihii hore ee sharciga ahaa ayaa heli doona
TULOMSAS 1 Shaqaale-Xukumi hore ayaa heli doona; Turkey tareenka iyo Engine Industry Corporation General Directorate (TULOMSAS), ogeysiis ah qorista cusub waxaa la daabacay on faafinta rasmiga ah. Ku dhawaaqida la daabacay, waxaa lagu sheegay in shaqaalaha joogtada ah ee 1 la shaqaaleysiin doono iyada oo aan loo baahneyn KPSS.
Turkey tareenka iyo Engine Industry Corporation ka Agaasinka Guud:
Shaqaalaha joogtada ah ee 1 waxaa loo shaqaaleysiin doonaa TŞLOMSAŞ Agaasinka Guud ee dambiilii hore.
xayeysiis qorista la shuruudaha iyo xaaladaha la daabici doono inta u dhaxaysa taariikhda Council Business Turkey 25.11.2019 -29.11.2019 website-ka.
Shaqaalaysiinta shaqaalaha waa in lagu sameeyaa baaxadda Xeerka Yönetmelik ee Nidaamyada iyo Mabaadi'da lagu dabaqi karo shaqaalaysiinta dadka hore loo xukumay ama aan ansax ahayn ee la dagaallanka argagixisada ". 25.11.2019 laga bilaabo taariikhda of Turkey ay khuseyso u baahan yahay si aad u dalbato in Arbetsförmedlingen.
XIDHIIDHKA: ISKUULKA XAALADAHA (ASSOCIATE)
SHAQADA WAAXDA LAMBARKA
SHAQAALAHA SHAQADA MAkIINADAHA
MACHINES KHUDBAD KHATAR 1
Shaqooyinka: TÜLOMSAŞ A.Ş. Xubinnimadii hore ee soo iibinta shaqaalaha joogtada ah 2015
Shaqada Dalbashada: TÜLOMSAŞ horey loo xukumay
TÜLOMSAŞ Shaqaale-weyne Xukumay oo Hore Ayaa Lahaa